UNICEF Myanmar: July 2015
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်တွင်း နေရပ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ စခန်းများ၌ကလေးများအဟာရချို့တဲ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မိခင်များ ပူးပေါင်းပါဝင်
ရေးသူ - ရဲလွင်
စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မတ်လ ၂၀၁၄။ ။ ၂၃နှစ် အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်သော မခင်စောသည် သူမ၏ ရင်သွေးငယ် နှစ်ဦးကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ကြည့်နေမိသည်။ သူတို့သည် စစ်တွေရှိ သက်ကယ်ပြင်စခန်းတွင် အခက်အခဲများကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ကလေးများလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Labels: child rights, Myanmar, Myanmar Version, nutrition, Rakhine State, UNICEF
ရပ်ရွာအထောက်အကူပြု ကွန်ရက်မှသည် အမျိုးသား လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းစဉ်ဆီသို့
အောင်သန်းမြင့်၊ ၁၃ နှစ် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ နယ်၊ ရွှေတောင်ရပ်ကွက်ရှိ မိသားစုနေထိုင်ရာအိမ်တွင်
တောင်ကြီးမြို့၊တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ် ဂျွန်လ၊ ၂၀၁၅ - တောင်ကြီးမြို့၏ ရွှေရောင်ရပ်ကွက်ရှိ သေးငယ် လှသော တဲအိမ်လေးတစ်လုံးတွင် အောင်သန်းမြင့်(၁၃နှစ်)သည် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့် (၄၁နှစ်)၊ သူမ၏ ဒုတိယခင်ပွန်း၊ သူ၏ အခြား မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်တို့နှင့် အတူ နေထိုင်ကြသည်။ မောင်နှစ်မ လေးယောက်အနက် အခြား နှစ်ယောက်မှာ အဖွားနှင့် နေထိုင်ကြသည်။
Labels: child protection, child rights, Myanmar, Myanmar Version, UNICEF
©UNICEF Myanmar/2015/Mariana Palavra
မျိုးဂျာတစ်ယောက် သူမ ကြားခဲ့ဖူးသော ဗုံးသံ၊ သေနတ်သံများ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုကြားက အကြောက်တရားတို့ကို ဘယ်တော့မှ မေ့လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။ သူမ ဆယ်နှစ်သမီး အရွယ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အစိုးရတပ်များနှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ တိုက်ပွဲများ နမ်ဆိုင် ရွာရှိ သူမ၏ အိမ်တံခါးဝသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
Labels: Hand washing, Kachin State, Myanmar, Myanmar Version, UNICEF, WASH
©UNICEF Myanmar/2015/Khine Zar Mon
ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးစာသင်ခန်းမှ ဝေဖြိုးသူ
ယခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်ရေးနေ့၏ သဘောထားအဆိုအမိန့်မှာ “ကလေးလုပ်သားပပျောက်ဖို့ ပညာရေးကိုအားပေးစို့” ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးများအားလုံး အတွက် အခမဲ့၊ မသင် မနေရနှင့် အရည်အသွေးမှီပညာရေး ရရှိစေရန် ယခုနှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဆော်သြ နေကြသည်။
Labels: child labour, child protection, child rights, Education, Myanmar Version, Non formal primary education, UNICEF Myanmar
မွေးစားရင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ခြင်းသည် ကရင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံး အတွက် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲ
©UNICEF Myanmar/2015/Manny Maung
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဂျူလိုင်၂၀၁၅- ဆရာမ နော်သဇင်တစ်ယောက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုဧ။် တိုက်ပွဲအကြားတွင် ပိတ်မိနေခဲ့ပြီး ကျိုးသွားသော သူမဧ။် ခြေထောက်ကို သုံးလကျော်လောက် အချိန်ယူ ကုသဖို့ လိုနေသည်။ သူမသည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တောနက်အတွင်းရှိ ဝေးလံလှသော ရွာသို့ ရောက်အောင် ရွာသွန်းနေသော မိုးနှင့် ရွှံ့ဗွက်ထူပြောလှသော မြေပြင်တို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ရက်ပေါင်းများစွာ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်။ အချို့ရက်များတွင် အိပ်ခဲ့ရသည်ပင် မရှိပါ။ အသက်သုံးဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ်ရှိ ဆရာမနော်သဇင်က “ ဒါကျမအလုပ်ပါဘဲ” ဟု ပြောသည်။ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မှတ်ပုံတင်သူနာပြု ဆရာမလေးသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အတွက်သော် လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေရန် အတွက်သော် လည်းကောင်း ဝေးလံပြီး တောကြီးမျက်မည်း အတွင်းရှိ ဒေသများသို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခရီးထွက်ခဲ့ရပါသည်။ အမြဲတန်းလိုလို သွားလာနေခဲ့ရသော ခရီးစဉ်များနှင့်အတူ ရရှိလာခဲ့သည့် ရင်းနှီးခင်မင်လာကြသော ဆက်ဆံရေးများကြောင့် ဆရာမနော်သဇင်သည် တိုင်းရင်းသား ရွာသူ၊ ရွာသားများသာမက အစိုးရမဟုတ်သော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ယုံကြည်မှုကိုပါ ရရှိခဲ့သည်။
Labels: Birth registration, Child righs, Myanmar, Myanmar Version, UNICEF
Birth registrations make all the difference in Kayin State
Kayin State, July 2015 - Naw Thazin has been caught in the middle of cross fire between non-State armed groups. She has broken her foot, which needed more than three months to heal. She has walked several days through rain and mud to get to remote villages deep into the jungles that border Myanmar and Thailand. Some days, she has gone with little to no sleep.
Posted by UNICEF Myanmar 18 comments:
Labels: Birth registration, Kayin State, Social Protection